Madaxweynaha iyo Danjire Mahiga oo ka hadlay dhammeystirka Baarlamaanka cusub-SAWIRO
(Mogadishu, Somalia, Aug, 22, 2012) Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed iyo ergayga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Dr. Agostine Mahiga ayaa maanta yeeshay kulan ku saabsan sidii loo dhammeystiri lahaa liiska xildhibaanada baarlamaanka cusub ee dalka.
Kulankaan oo uu ka qeyb galay guddoomiyaha KMG ah ee Baarlamaanka Generaal Muuse Xasan, wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka C/samad Macalin Maxamuud iyo taliyaha Ciidamada AMISOM, markii uu soo dhamaaday kaddib waxaa Shir jaraa’id si wada jir ah u qabtay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo Danjire Mahiga.
"Kulankaani wuxuu daba socday kulamadeenii hore, waxaana ka hadalnay sidii loo dhammeystiri lahaa qeybta ka dhimman xubnaha baarlamaanka iyo mashaakilka yar ee jira sidii loo xalin lahaa, waxaana isla garanay inay lagama maarmaan tahay in xalka la dedejiyo oo aan isla garano waxa lagama maarmaanka ah" ayuu yiri madaxweyne Shariif.
Madaxweynaha oo ka jawaabayay su’aal ahayd in baarlamaanka lagu darayo xubnihii ay soo celiyeen guddiga TSC-du ee lagu sheegay inay dambi galeen, wuxuu yiri:-
"Dambi waxaa lagu xaqiijiyaan qaab la yaqaano oo ugu dambeyn ah in maxkamadi xukunto dadka, mana jiraan dad xukuman oo liis ku jira, in dad la yiraahdo dambiileyaalna waxay u baahanaysaa in xukun maxkamadeed la keeno, waxayna waxyeeleysaa in xilligaan oo kale wax yaabo noocaas ah la dhex galo, nabaddii iyo kalsoonidii dadka, (waxayna keeneysaa) dadku waxay ka soo gudbeen in dib loogu celiyo, waxay kaloo wax yeeleysaa habkii dib u heshiisiinta iyo heshiis kasta oo suura gal ah in lala galo dad ka soo horjeeda dowladda, aragtidaasina waa inay meesha ka baxdaa".
"Waa inaan isha ku heynaa horumarka nabadda, isku kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ka dhex jirta, in si nabad ah loogu gudbo marxaladda cusub, ayadoon qof, koox iyo qolo aan la bartilmaameedsaneynin" ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Ergayga gaarka ah ee xogyaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Dr. Agostine Mahiga oo shirka jaraa’id ka hadlay ayaa sheegay in uu kulamo la qaatay odayaasha iyo guddiga TSC-da, kaddib markii uu shalay la kulmay wakiilo ka socday beesha caalamka, isla markaana caawa ama ugu dambeyn berri subax la heli doono liiska xildhibaanada ka maqan Baarlamaanka si isla berri loo dhaariyo.
Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya